Posted by Tranquillus | Jul 23, 2021 | Shabakada
Waad ogtahay dhibaatada, sida caadiga ah waa marka aadan shaqada joogin oo haddii ay suurtagal tahay boqolaal kiilomitir u jirta xafiiska, in si deg deg ah lagugu soo waco. Waad ogtahay, markii magac aad u muhiim ah, tixraac ama qiimo lagu waayey dukumenti. Haa, waan ku soo waceynaa. Iyo inta udhaxeysa laba tareen ama laba diyaaradood, waxaan kulahadleynaa sidii inaad feylasha oo dhan maskaxda ku hayso. Mar dambe ha walwelin, wax walba waa hagaagsan yihiin. Anigu waxaan ahay Aurélien Delaux, oo ah lataliye lataliye, waxaanan isla baran doonnaa sida loo kobciyo Word Online. Noocani khadka tooska ah ee ereyga wuxuu ku siinayaa inaad si bilaash ah ugu hesho dhammaan dukumiintiyadaada meesha aad rabto, markaad rabto. Waxaan isla ogaan doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan uga soo ceshano mashaariicdiina, sida loo qaabeeyo oo loo saxayo si fudud, iyo ugu dambayntii sida loo fuliyo shaqada iskaashiga ee qadka. Marka la soo koobo, waxaad awoodi doontaa inaad ka jawaab celiso nooca ereygan sifiican oo dhaqso leh, meelkasta oo aad joogto. Waxaan kuu rajeynayaa tababar heer sare ah ...
Digniin: Tababarkan ayaa loo malaynayaa inuu mar labaad bixin doono 01/01/2022
Baadh ereyga khadka tooska ah Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Jaangooyada wargeys ee leh ereyga
horeSoo hel Excel Online (Microsoft 365 / Office 365)
socdaAstaamaha aasaasiga ah ee Muuqaalka shabakadda